နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Ninjago နဂါးတိုက်ပွဲ Lego မှ
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Ninjago နဂါးတိုက်ပွဲ Lego မှ
ဖေါ်ပြချက်: ဤအရာသည်အလွန် 3D ပစ်ခတ်မှုမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ်မိကျောင်းနှင့်အတူထိတ်လန် 3D အမြင်အာရုံထိခိုက်မှု Ninja နှင့်အတူအပြင်းအထန်ကြသည်။ Ninja အမိကျောင်းနှင့်အတူပြင်းစွာသောအစစ်တိုက်ပွဲစတင်ပြီးမိမိအပျံ Ninjago စက်ရုပ်ကိုမောင်းနှင်နေသည်။ က vict ယုံကြည်ဆုံးကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်း,
ထိန်းချုပ်ရေး: This isagreat 3D shooting tower defense game. Shocking 3D visual impact with formidable monsters are battling with Ninja. Ninja is driving his flying Ninjago robot startingafierce battle with the monsters. Battle till the end, believing that victory belongs to the justice!
ကစား: 686,009 tag ကို: နဂါး, နဂါးဂိမ်းများ, စစ်တိုက်ခြင်း, စစ်တိုက်ဂိမ်း, ninjago, ninjago ဂိမ်း, Lego, Lego ဂိမ်း